Samsung na-aga n'ihu Tizen ma na-arụ ọrụ na Z9 | Akụkọ akụrụngwa
Samsung na-aga n'ihu Tizen ma na-arụ ọrụ na Z9
N'isiokwu m gara aga, agwala m gị banyere mbak ahịa nke usoro sistemụ dị iche iche dị ugbu a nke anyị nwere ike ịhụ ka iOS na gam akporo na-achị n'ahịa ahụ nwere akụkụ nkwonkwo nke 99.1% yana ebe anyị nwere ike ịhụ otu gam akporo na 86,7% na iOS na 12,4% jisiri ike mee ka Windows Phone na BlackBerry OS pụọ n'ahịa. Ma, Samsung gara n'ihu na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ ya, Tizen, nke dị ugbu a bụ naanị maka mba ndị na-apụta. Tizen, n'adịghị ka gam akporo, chọrọ obere ngwaike iji rụọ ọrụ dị mfe ma ụlọ ọrụ Korea na-ere ya naanị na ụdị mba ndị a na mgbakwunye na iji ya na ụdị smartwatch ya dị ka Gear S2, nke ga-enweta mmeghari ohuru.
Dika anyi nwere ike iguta na GSM Arena site na Zauba, Samsung na aru oru ohuru ohuru di elu nke diri Tizen. Anyị amaghị mba ndị ọ ga-aga ma ọ nwere ike ịbụ ụzọ mbụ ịmalite ịbawanye sistemụ arụmọrụ Korea gburugburu ụwa, ebe ụdị ndị gara aga nke sistemụ arụmọrụ Z3 na Z2 jisiri ike. ahụla naanị ọkụ na mba ndị na-apụta, ebe ọnụahịa nke ọnụ ọnụ ga-esi sie ike dị ka o kwere mee iji gbalịa iru akụkụ ka ukwuu nke ọha na eze.
Samsung Z9 nwere ike iji ihu igwe 5-inch kụọ ahịa na mkpebi HD zuru oke. Ọ ga jikwaa 8-core processor na ga-enwe n'etiti 2 na 3 GB nke RAM. Na usoro nke imewe, Samsung Z9 ga-eso aesthetic akara nke Z nso, na ókè mechie nkuku na ya isi akụrụngwa ga-abụ plastic dị ka aga na ụdị. N'oge a anyị enweghị ụbọchị ọpụpụ ma ọ bụ ọnụahịa efu. Anyị amatabeghịkwa na ọ ga-emesịa gbado onye ọ bụla ma ọ bụ ga-anwa ịchọta ọdịiche dị n'etiti ngwụcha ngwụcha dị elu gburugburu ụwa, ihe siri ike taa belụsọ na ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ na-emebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung na-aga n'ihu Tizen ma na-arụ ọrụ na Z9
Android Nougat 7.0 bịarutere maka Nexus na-amalite taa
Ndị na-egwu egwu kpọnwụrụ Taiwan maka "ịchụ nta" Pokémon